ringID အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
၏ဖော်ပြချက် ringID- Live Stream, Live TV and Online Shopping
ringID သည်သင်နှစ်သက်သောအင်္ဂါရပ်အားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းတွင်သွားနိုင်သည်။ ဂီတနှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အပြည့်အဝပေါင်းသင်းနိုင်သည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုနှင့် Live ကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပရိသတ်များသို့သင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှင့်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော platform တစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အတွက် ringID ကိုယခု download လုပ်ပါ။
LIVE သို့ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်သင်၏လျှို့ဝှက်အရည်အချင်းကိုပြပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကြည့်ရှုသူသန်းပေါင်းများစွာ။ ကြော်ငြာများပါသောမဆီလျှော်သော newsfeed ဖြင့်ခေါ်ဆိုခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ browsing လုပ်ခြင်းကိုသာကန့်သတ်မထားပါနှင့် ... ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွင်အချက်အလက်နှင့်ဘက်ထရီလျော့နည်းစေပြီးသင့်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်သတင်းလွှာကိုဖန်တီးရန် newsfeed ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ။
“ မိုဘိုင်းအထုပ်ငယ်တစ်ခုထဲသို့အားကောင်းသည့်ထိုးနှက်မှုကိုဖြည့်စေသောအက်ပလီကေးရှင်း” - Forbes ။
ringID Live သည်သင်၏ပလက်ဖောင်းအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကမ္ဘာသို့ထုတ်လွှင့်ပါ။ သင်၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုပူးတွဲစီစဉ်ရန်ကြည့်ရှုသူအားပျော်မွေ့ရန်နှင့်ခေါ်ဆိုရန်အတွက်အခြားသူများအတွက်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုလက်ခံပါ။ လက်ကိုင်ဖုန်းကိုဘယ်နေရာမဆို၊ အချိန်မရွေးတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်လွှင့်နိုင်မည့်ထူးခြားတဲ့စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်။ သင်၏ ၀ ါသနာများ၊ စွမ်းရည်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အပျက်များကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်သင်၏စရိုက်ကိုပြသပြီးသင်၏ပုံပြင်ကိုမျှဝေပါ။ လူသစ်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်၍ နောက်လိုက်များရရှိခြင်း။ ကြည့်ရှုသူများထံမှရွေးနုတ်နိုင်သောလက်ဆောင်များကိုရယူပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်ဆုများကိုရယူပါ။
Channel သည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာအားလုံးကိုသင်၏မိုဘိုင်းပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်တင်ပေးသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောရုပ်ရှင်၊ ဂီတနှင့်အခြားစိတ်ဝင်စားမှုများကိုလိုက်နာပါ။ အမျိုးအစားများအလိုက်ရေပန်းစားသောလိုင်းများကိုရှာဖွေပါသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ချန်နယ်ကိုထိန်းသိမ်းပါ သင့်ကိုယ်ပိုင်ချန်နယ်ကိုဖန်တီးပြီးအခြားသူများပျော်မွေ့ရန်အကြောင်းအရာများကိုထုတ်လွှင့်ပါ။ သင်၏အကြောင်းအရာများကိုထုတ်လွှင့ ်၍ မည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုနောက်လိုက်များကိုရယူပါ။
3G, Wi-Fi သို့မဟုတ် 2G ၌ပင်အသံအရည်အသွေးများနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့သောအသံဖြင့်အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများကိုခံစားပါ။ ဆက်သွယ်မှုများ။ virtual world မှတကယ့်စကားပြောဆိုမှု၏နွေးထွေးမှုကိုခံစားကြည့်ပါ။ လျှို့ဝှက်စကားပြောခန်း -
ပျောက်ကွယ်သွားသောရုပ်ပုံများကိုမပို့ပါနှင့်။ စာတို၊ ဓာတ်ပုံ၊ အသံနှင့်ဗီဒီယိုအပါအ ၀ င်မည်သည့်စာတိုကိုမဆိုဖျက်လိုဖျက်ဆီးပြုလုပ်ရန် timer ကိုသတ်မှတ်ပါ။ ၎င်းသည်ချက်တင်မှတ်တမ်းမှပျောက်သွားသောချက်ချင်းသတင်းများကိုမျှဝေရန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ထူးခြားချက်များ - အသံခေါ်ဆိုမှုများ - ရပြီ! - - ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု - Yup! - - Chat: Of သင်တန်း! ကျွန်ုပ်တို့မှာလျှို့ဝှက်ချက်စကားတောင်ရှိတယ်။
- စတစ်ကာများ - သူတို့ဆီမှာတန်ချိန်များစွာရှိသည်။ - Newsfeed: ဟုတ်ကဲ့။ - မာလ်တီမီဒီယာမျှဝေခြင်း: ဟုတ်ကဲ့။
တေးဂီတကိုရှာမတွေ့ပါ။ / လွန်ခဲ့သောအပတ်ကမှသင်၏ newsfeed တွင်သင်မြင်သောဗွီဒီယို? ယခုတွင်သင်သည် newsfeed မှဂီတနှင့်ဗွီဒီယိုကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင် playlist တွင်ထည့်နိုင်ပြီးအော့ဖ်လိုင်းတွင်ကြည့်ရှုရန်၎င်းတို့ကို download လုပ်နိုင်သည်။ သင်၏လူမှုမီဒီယာအားလုံးအတွက်အမှန်တကယ်ထိရောက်သောမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
သင်၏စာကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဖျက်ပစ်ခြင်းဖြင့်စိတ်ရှုပ်စေသော“ oops moment” ကိုရှောင်ပါ။ မမြင်ရသောသတင်းစကားကိုအမြဲတမ်းဖျက်ပစ်ရန်သေချာပါစေ။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောနေ့စဉ်သတင်းများကိုအဆင်ပြေသောနေရာတစ်ခုသို့ရောက်စေရန်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသတင်းပေးသူများကိုရွေးချယ်ပါ။ World Wide Web မှသတင်းပေးသူများကိုရှာဖွေပြီးသင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းများအားလုံးကိုသီးခြားအစာတစ်ခုရရှိရန်ရွေးချယ်ပါ။
သင်မိတ်ဆက်ပေးသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်အသစ်များနှင့်သင်၏ ringID မှအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကိုသင်နှစ်သက်ပါလိမ့်မည်။ အတွေ့အကြုံ။ ringID သည်လူကြိုက်များသောအင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုပါဝါထုပ်ပိုးပြီးအသုံးပြုရန်အတွက်လွယ်ကူစေသည်။
www.ringid.com ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်ပိုမိုသိကျွမ်းပါ။
ဘာအသစ်လဲ ringID- Live Stream, Live TV and Online Shopping 5.7.8
RingID Live Now